>May – Poem | MoeMaKa Burmese News & Media
>May – Poem
ကိုယ်လေ တကယ်ပဲ ရိုကျိုးပါရဲ့
သံသယဆိုတာကြီးကို ပယ်မဲပေးချင်တာလေ ….။
ယုံကြည်မှုဆိုတာကြီးကို ကိုယ်ကကြောက်တဲ့လူ ….။
ဒီယုံကြည်မှုတွေနဲ့ရစ်ပတ် ကိုယ်လေ တကယ်ပဲမွန်းကြပ်မိပါရဲ့ ….
ဘယ်ဖက်ကိုတိမ်း ကိုယ်လိုရာကို ယိမ်းဖို့လဲမတတ်
နှောင်ကြိုးအထပ်ထပ် အဆက်ဖြတ်ကာ ဥပက္ခာပြု
မမှုလို့ကလဲမဖြစ် တကယ်ကိုခက်တာ ….
ဆုလာဘ်ကြီးတပါး တ၀ါးဝါး တဟားဟားရယ်နဲ့ပေါ့ ….
ယုံကြည်မှုကို ခုတုံးလုပ်သူဟာလေ အမြတ်ထုတ်သူ
ယုံကြည်မှုကို ဖန်ထိုးသူဟာလေ အမျိုးမျိုးညစ်သူ
ယုံကြည်မှုကို ပျက်ရယ်ပြုသူဟာလေ လုံးလုံးမမှုသူ
ယုံကြည်မှုကို လောင်းစားသူဟာလေ အကောင်းစားတွေကိုယူ
တစုတ်စုတ် တသတ်သတ် တဆွေးဆွေး တမြည့်မြည့်
ယုံကြည်မှုဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့အရာမဟုတ်
အများက ရယ်သွမ်းသွေး တကယ်စိတ်လေးရတဲ့
သံသယဆိုတာ တကယ်တော့ အရေးပါလှပေါ့
အခွင့်မျှော်သူ သင့်တော်သူ ဟိုလူတစုအတွက်
ယုံကြည်မှုနဲ့ သံသယ ချိန်ထိုးတဲ့ ဒီပွဲမှာ …..
(အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ ဂါဝပြုလျှက်)
(ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးသို့ ….)